Hargeysa iyo Habeenka Cabdillaahi Xasan Ganay – Hargeysa Cultural Centre
Daaddihiye: Rooble Cabdi Muuse
Cabdillaahi Xasan Ganey waxa uu ka mid yahay halabuurka suugaanyahanka ah ee Somaliland. Cabdillaahi waxa uu in muddo ah ka maqnaa dalka. Waxa uu suugaantiisa ku suntan arrimaha bulshada intooda badan ka soo tiriyey dalka Maraykanka. Cabdillaahi waxa kale oo uu aad caan ugu yahay samaynta heesaha, kuwaas oo ay qaadaan fannaaniin tiro badan. Barnaamijkani waxa uu ahaa kii u horreeyey ee uu dalka ku qabto sannadka 2017-ka. Waxa ka soo qayb galay dhallinyaro aad u tiro badan oo xiisaynayey suugaantiisa.
Sidoo kale waxa uu barnaamijkani u gudbay gobolka Togdheer, caasimaddiisa Burco. Barnaamijkaas Burco waxa Cabdillaahi X. Ganey ku wehelinayey abwaan Cabdiraxmaan Abees iyo abwaan Xasan Daahir “Weedhsame.” Maalintan oo ku beegnayd 25-kii Agoost 2017 ayaa waxa ka soo qayb galay tiro ka badan 900 oo qof.
Dhallinyarta iyo Ganacsiga